Kutheni Khetha Us - Weifang Kailong Pump Industry Co ,. Ltd.
KUTHENI UKUPHOSWA KOTYALO-MALI?
I-Kailong Precision Foundry ibonelela ngeenzuzo ezininzi kumsebenzisi wokugqibela, umyili, okanye umenzi, ngokusebenzisa inkqubo yokulahla i-wax yokuvelisa izinto, zihlala zikhulelwe ukuba zenziwe ngeendlela ezinokubiza kakhulu okanye zithintele ngokwemiba yoyilo. Olu hlobo lokuphosa kutyalo-mali luthatha uphawu olwahlukileyo olungenakufikeleleka kwezinye iinkqubo, ngenxa yokusebenzisa kwethu imilo ye-wax efakwe njengeepateni. Oku kusivumela ukuba sifumane inkcukacha kunye nokuchaneka kwezinto ezenziwe ngenaliti yokubumba, ihlala igcinelwe indawo yokunyibilikisa isinyithi, kodwa enyanisweni yenziwe kwizinyibilikisi eziphezulu kunye neealloys ezinje ngentsimbi kunye nentsimbi engenasici. Kungenxa yokuba uyilo olwahlukileyo lweqokobhe le-ceramic engenamthungo eyakhelwe ngakwimilo ye-wax echanekileyo. Igobolondo le-ceramic ligcina ubume bezi geometri ze-wax kumaqondo obushushu aphezulu kakhulu ngelixa isinyithi esinyibilikisiweyo, esigalelwe kwiigobolondo, siqina kukuphosa kwakho. Ngenxa yezi zendalo, ezichanekileyo, kunye nokungenamkhawulo kwejometri okunokwenzeka ngenkqubo yokuphosa kutyalo-mali, inkqubo yokuphosa utyalo-mali ibonelela ngezi zibonelelo zilandelayo:
Sebenzisa ukutyalomali kokutyala kuvelisa izinto ezichazwe ngcono njengomboniso womnatha osondeleyo, ngamanye amagama, izinto ezifuna ukulungiswa kancinci okanye ukungaphindi zenziwe. Inkqubo iyakwazi ukuvelisa iinkcukacha ezichanekileyo kunye nokuchaneka komlinganiso omalunga +/- 0.005 "nge-intshi nganye yomlinganiso ekubunjweni ukuya kuthi ga kwi-80 kgs okanye kwiigrama nje ezimbalwa ..
Kuzo zonke ezinye iinkqubo, ukusetyenziswa kwezixhobo yinto ebalulekileyo yexabiso. Nangona kunjalo, utyalo-mali ekubunjweni kwesixhobo senziwe kwi-alloyum alloy eyenziwe ngomatshini ngokulula, kodwa kuba ifumana i-wax kuphela, inobomi obude kakhulu. kailong isebenza nabaxumi bethu ukunceda ngeemfuno zezixhobo, kwaye ijonga konke ukwenziwa kwesixhobo, kunye nokugcinwa kwezixhobo ezigqityiweyo. Iindleko zezi zixhobo ze-wax zingaphantsi kakhulu kunaleyo yokuphosa ukufa okanye ukubumba, kwaye amaxesha amaninzi kufa kunokwenziwa njengemingxunya emininzi kunye nokuma okuzenzekelayo okanye okupheleleyo ukunciphisa iindleko zokuphosa nangakumbi, kunika imbuyekezo ephezulu kakhulu kutyalo-mali isixhobo.
Amakhulu e-alloys ahlukeneyo anokuphoswa kusetyenziswa inkqubo yokuphosa utyalo-mali, kwiziseko zesinyithi ezisetyenziswa kakhulu ezinje ngeensimbi, iinyithi ezingenasici, ubhedu, i-nickel, iirons, i-cobalt, nokunye. Uncedo oluphambili oluhlala lungahoywa kukuba ukusukela ukugqitywa koomatshini kungancitshiswa okanye kupheliswe, ukhetho lwengxubevange lunokunyuselwa kwisinyithi esomeleleyo, esihlala sinzima kumatshini, sikhokelela ekusebenzeni ngcono kwemveliso yokuphela. I-kailong iphosa uninzi lwezinto zobunjineli eziqhelekileyo ezisetyenziswa kuluhlu olubanzi lwamashishini, kunye nesinyithi esikhethekileyo kwizicelo ezifunwayo.
Ezona zicelo zixhaphakileyo zokuphosa kutyalo-mali zikwiimeko apho imisebenzi enamaxabiso okugqiba inokuncitshiswa, okanye ipheliswe, kwizinto ezikhoyo zesinyithi. Oku kungenxa yokuchaneka kweenkcukacha kunye nemilinganiselo enokufunyanwa ngokulahla utyalo-mali. Namhlanje, abavelisi abangakumbi nangakumbi bajikela ekuyileni izinto zabo ezintsha njengokhetho lotyalo mali, kuba iindawo ezininzi zinokwenziwa njengokuphosa enye, ukunciphisa ukuphatha, ukuhlanganisa, ukuwelda kunye neendleko zokuhlola.
Ukuphoswa kotyalo mali liphupha loyilo. Ubume obuntsonkothileyo, ngaphandle nangaphakathi kunokwenzeka ngokusetyenziswa kwesixhobo, uyilo lwe-wax, okanye i-ceramic coring. Uqwalaselo lwangaphakathi olungenakwenzeka kunye nezinye iinkqubo ezininzi zokuvelisa zinokubonelelwa nguCheonseng ngokusebenzisa ukutyalwa kotyalo mali. Ngaphandle, iidonga ezingenadrafti, imingxunya, imingxunya, abaphathi, ukubhala iileta, iiseringi kunye neminye imisonto inokuphoswa ngokulula ngokunjalo.
UKULAHLEKA KWEZIMPAWU EZINCINANE
Sebenzisa i-castings yotyalo-mali kuvelisa izinto ezifuna ubuchwephetsha, kwaye ke ngoko kuncitshisiwe kakhulu kwisinyithi esilahlekileyo kwiitshipsi kunye naseeshafini. Oku kubaluleke ngakumbi xa usebenza ngezinto ezinje ngeentsimbi ezingenasici, ii-alloys ze-nickel, kunye ne-cobalt alloys, ezingabizi mali kuphela, kodwa kunzima ukuzisebenzisa.
Kuba izinto ze-cast ziveliswa ngokusebenzisa iipateni ze-wax kwisixhobo esinye, ukuchaneka komlinganiso kuyafana ukusuka kwinxalenye ukuya kwinxalenye, unyaka nonyaka. Xa utshintsho loyilo lufuneka, kuhlala kunokwenzeka ukutshintsha izixhobo esele zikhona ngexabiso elincinci.
Ukusuka kuyilo ukuya ekugqityweni, ukutyalwa kotyalo mali kuhlala kunikezelwa phantsi kweeveki ezi-4-6.
Icandelo loomatshini, Impompo yamanzi Impompo, Impompo yentsimbi engenazingcingo, IComprifugal Pump Impeller, Impompo yokuPhosa, Ityala lempompo,